N'ihe banyere ngwaahịa maka ụmụ ọhụrụ na ụmụaka, ndị nne na nna ugbu a na-eche ihu na-enyeghị onyinye ngwaahịa. Site na nwatakiri na-elekọta ileba ụlọ nke ụmụaka anya, site na ntụrụndụ na njem na-enye ezinụlọ na ụmụ ntakịrị ka ha na-enwe mmasị n'ịmụ ihe egwuregwu, ndị nne na nna na-eche na isiokwu ndị dị oké mkpa na idei mmiri. Ma ngwaahịa ndị dị aṅaa bara uru, nke na-akwado nkwalite ụmụaka, ma ọ bụ na ụfọdụ ngwaahịa a magburu onwe ha nwere ike ibute nsogbu ndị na-emerụ ahụ? Onye ndu anyị na - enye gị ndụmọdụ - site na mbụ ngwaọrụ gaa n'ọnụ ụlọ.
Ọ na-adịrị ndị nne na nna na-atụ anya ka ha nweta ndepụta nke ihe ndị bụ isi site na midwife. E mere niile errands na ọbụna biiri a set nke akpịrịkpa n'ihi na arọ akara si ahịa ọgwụ, ha nwere mma mmetụta na-enye ọhụrụ ahụ bịaranụ ka ya mkpa ya. N'ọgbọ nke Intanet, ọtụtụ ihe adịwanye mfe, mana ejiri ihe ọmụma na nchebe kpuchie. Nnukwu egwu na otiti-eto eto nne na nna mgbe, bụ n'ihu Ọnwụ Mberede Ụmụaka (ỌMỤ: Ọnwụ Mberede Ụmụaka). Site sara mbara mgbochi mkpọsa iwelata ize ndụ, ọnụ ọgụgụ nke ọnwụ na Germany nke 602 na 1998 ka 152 2013 na n'ezie budata belata, ma na-atụ egwu nọgidere. O nwekwara ike ịbụ n'ihi na enweghi nghọta zuru oke. Nne na nna na-enweghị nchebe na-enye ohere ka ụlọ ọrụ ahụ nọgide na-azụlite ngwaahịa ọhụrụ. Ya mere nyochawa otutu ngwaahịa mbio ugbu a dị site na nwa Monitors na mmetụta ute maka akụkụ okuku ume na nlekota ka okpomọkụ-inye iwu Baby ihi ụra nwa sọks na sensọ nyochaa obi ọnụego na oxygen ọdịnaya.
Ụdị yiri nke ahụ na-aga n'ihu ugbu a na-ebute ngwaahịa mmụta na-enye ndị obere na ụmụ akwụkwọ. N'ebe a kwa, ihe na-eme ka ụlọ ọrụ na ndị na-ahụ maka ọrụ nweta ihe na-ejighị n'aka n'aka ndị nne na nna. Nchegbu banyere na-ebelata ebelata ohere, akwụkwọ bara ma ọ bụ ndị ọzọ ụlọ akwụkwọ ọrụ kenjo ihe mere, na-ya mere mgbe nyekwara n'oge on n'ịkwalite - taa bụ iche iche: na mgbakwunye na multi-ọtọ ọrụ maka ụmụ ọhụrụ na-amụta kọmputa maka na-amụ ije na-onwe English ọmụmụ ama maka ụmụaka gbara otu afọ elu na N'ezie. Tụkwasị na nke ahụ, ihe mgbakwunye nri ga-akwalite ịta ahụhụ na arụmọrụ na ihe nnwale kpụ ọkụ n'ọnụ na-eme ka ọchịchọ mmadụ na-eme nnyocha.
akpatre guzo aha, a ọhụrụ na-adọ nke ndụ, nke na-apụtakarị bụghị naanị a reorganization nke ndụ ezinụlọ, ma sokwa n'out oge na a zuru ezu refurbishment nke nwa na a redesign nke ọta akara amalite. Ọ bụghị naanị obere akpa a gbanwere iji dị elu ma dị arọ nke nwatakịrị ahụ, nke kwesịrị ịdị mma na nke siri ike, dị mkpa ugbu a. Kamakwa ngwá ụlọ, tinyere a-ekwe omume ịdị elu na awụfu mgbanwe oche na a kenha ergonomic oche oche, ugbu a bụ mgbe elu na shopping ndepụta.
Oke nke ngwaahịa bụ n'ezie na-akarị ike ikwado kama mmadu, na àgwà na nchepụta nke nwa kwesịrị ekwesị ngwaahịa nhọrọ, arịrịọ na-eto eto na onye ọ bụla n'ihu nkà na ụzụ ọhụrụ na ihe ọ bụla ọhụrụ e bipụtara ọmụmụ development ka nne na nna. N'ihi na ọbụna ọnụahịa dị elu adịghị n'aka nkwa maka àgwà ngwaahịa. Maka ezigbo ihe mere ụlọ ọrụ nyocha nke onwe onye na-eji edozi nsogbu, nchekwa, nchebe gburugburu ebe obibi na njiri. Na nduzi anyị, ị ga-ahụ ihe ederede na nyocha nyocha na nhazi nhọrọ nhọta.